Izinto Zomshini - Izingxenyekazi Zekhompyutha Ezimahala | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Imininingwane, incazelo yokusetshenziswa, ama-datasheet, ama-pinouts, izinsiza eziku-inthanethi, okokufundisa nakho konke okudingayo ukuze ufunde ukuthi ungazisebenzisa kanjani izinto eziyinhloko ze-elektroniki zamaphrojekthi wethu.
Okubaluleke njengokuthenga i-transistor, unkulunkulukazi, i-dimmer noma inzwa yokushisa ukwazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani, izici okufanele zazi uma zisisiza emsebenzini wethu nokuthi singakuphoqa kangakanani.
Ngakho-ke vakashela amathebhu esikushiyela wona okwakudala phakathi kwama-Classics.
Ama-oscilloscopes angcono kakhulu wephrojekthi yakho ye-elekthronikhi
Por Isaka kwenza Amaviki angu-2 .
Uma ufuna ukumisa ilabhorethri ye-electronics, elinye lamathuluzi abalulekile okungafanele alahleke ama-oscilloscopes. Nge...
I-Servo SG90: konke odinga ukukwazi mayelana nale motor encane kagesi
Por Isaka kwenza Amaviki angu-4 .
Kunezinhlobo eziningana zamamotho kagesi, njengezitebhisi, noma ama-stepper motors, nama-servomotors. Ngaphakathi kwalokhu...
I-M5Stack: yonke into le nkampani ezokunikeza yona ku-IoT
Por Isaka kwenza Izinyanga ze-2 .
I-M5Stack iwuphawu oluzwakala kakhulu phakathi kwabenzi bomhlaba abasebenza ngezinhlelo ze-IoT….
Por Isaka kwenza Izinyanga ze-3 .
Isekethe ehlanganisiwe ye-555 ingenye yama-chips adume kakhulu ongawathola phakathi kwezingxenye ze-elekthronikhi. Ingaqhamuka...
I-Schottky diode ingenye yezingxenye ze-elekthronikhi ezithakazelisa kakhulu zamaphrojekthi kagesi. Uhlobo olukhethekile kakhulu...
Por Isaka kwenza Izinyanga ze-4 .
Ikhebula le-jumper, noma ikhebula le-jumper, ngokuvamile lifika ngenqwaba yamakhithi kagesi, kusuka kwamanye amarobhothi, kuya...
Kule bhulogi sesixoxile kakade ngezinye izingxenye ze-elekthronikhi, okuhlanganisa ama-electrolytic capacitors, nokuthi zingahlolwa kanjani. Manje...
Amasekhethi ahlanganisiwe: ayini, umehluko nalawo aphrintiwe nokuningi
Amasekhethi ahlanganisiwe, ama-chips, ama-microchips, i-IC (I-Integrated Circuit) noma i-CI (I-Integrated Circuit), nanoma yini ofuna ukuwabiza, awuhlobo ...
Amasango anengqondo: konke odinga ukukwazi
Por Isaka kwenza Izinyanga ze-5 .
Amasango anengqondo ayisisekelo se-digital electronics. Ngalesi sizathu, zibaluleke kakhulu, futhi uma ufuna ukuqala ...
I-Thermal Paste: kuyini, izinhlobo, isetshenziswa kanjani ...
Por Isaka kwenza Izinyanga ze-6 .
I-thermal paste iyinto esetshenziswa kakhulu emhlabeni we-electronics. Ngokuvamile njengesixhumi esibonakalayo sokuthuthukisa ...
Por Isaka kwenza Izinyanga ze-7 .
Phakathi kwezingxenye ze-elekthronikhi ezihlaziywe bekukhona ne-toroidal transformer, ngaphezu kwalokho siphinde saphatha lolu hlobo lwezinto lapho ...